သားရေသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? နေအိမ် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ပိုက်ကွန်ထဲကနေ? ငါဆပ်ပြာနှင့်ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ငါ့အဖြူရောင်ဖိနပ်သားရေမြှုပ်ကိုဆေးကြောင့် .... otmylis ....
သားရေအထူးသဖြင့် cuffs နှင့်ကော်လာ, က glycerol သုတ်ဖို့အခြိနျမှနျမှနိုင်ပါတယ်။ သူတို့သည်နောက်တဖန်ထွန်းလင်းရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဂျာကင်အင်္ကျီသို့မဟုတ်အင်ျကြီကိုအလွန် Ponos နှင့်မတောက်ဘူးဆိုပါကလတ်ဆတ်တဲ့လိမ္မော်ရောင်အခွံနှင့်သူတို့ကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ဝတ်ဆင်သားရေဖိနပ်ကိုသင်နို့ 3-4 ပေါက်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် turpentine refresh နိုင်ပါတယ်။ သမားရိုးကျထုံးစံ၌စင်ကြယ်စေထိုကဲ့သို့သောအဖြေတစ်ခု, အီးပွတ်နယ်။
White ကသားရေဖိနပ်လက်ဆေးရေမြှုပ်ရေမြှုပ်သို့မဟုတ်ပျော့ schtkoy ဖြေရှင်းချက်နှင့်ဆေးနှင့်ခြောက်သွေ့သုတ်ခဲ့သည့်နောက်, ဆပ်ပြာဖြေရှင်းချက်၏ tplom ၌နှစ်ပြီးသော။ ထိုအခါ lubricated ဖိနပ်အရောင်အရောင်, အရည်သို့မဟုတ် Sochi Flora ကိုဆိုလိုသည်နှင့်ပိုလန်အထည်ပွတ်ပေးပါ။
နယူးဖိနပ်စိုစွတ်သောရာသီဥတုများတွင်ဝတ်ဆင်ခံရဖို့အကြံပြုကြသည်မဟုတ်။ ပထမဦးစွာဖိနပ်၏ဘဝါး၏အပေါက်သဲလျော့နည်းစိုစွတ်သောဖြစ်ပါသည်ဖုံးလွှမ်းသည်ဟုခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုစဉ်အတွင်း ie မထီမဲ့မြင်ပြုရပါ။
အသစ်ကဖိနပ်များ၏ဒေါက် zhstkie ဖနောင့်ပွတ်သပ်ကြဘူး, တစ်ဖယောင်းတိုင်နှင့်အတူအနားပွတ်သပ်စေရန်, တစ်ဦးစိုစွတ်သောဆပ်ပြာသို့မဟုတ်အရက်စုပ်ယူထားသည်။
တစ်ဦးကခြစ်ရာဒါမှမဟုတ်ပါးလွှာအရေပြားအမျိုးသမီးဖိနပ်အပေါ်တစ်ဦးအသေး scuffing အလွယ်တကူလက်သည်းဆိုးဆေးသို့မဟုတ်ကော် BF-2 ၏ပါးလွှာသောအလွှာ scuffing povrezhdnnoe ထိုင်ခုံများနှင့်နောက်ကျောဘက်ခြမ်းမှာဖြစ်ပေါ်စေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်အသားအရေကိုချွတ်နှင့်နေရာ povrezhdnnomu မှအပိုင်းအစကိုနှိပ်။
သူတို့အခြောက်လာသောအခါမူပိုင်သားရေဖိနပ်တစ်ဝက်မီးသီး, နို့၌နှစ်ပြီးသောဝါဂွမ်း swab နှင့်အတူသန့်ရှင်းနှင့်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါအရောင် flannel ရန်။
tmnoy အသားအရေတစ်ဦးထွန်းလင်းရရှိသည်လက်ကိုင်အိတ်, အီးဝါဂွမ်း swab သံပုရာဖျော်ရည်၌နှစ်ပြီးသောလျှင်သုတ်။ အသားအရေ tmnoy ဆောင်းပါးကိုလည်း pridat တောက်ပြောင်ကော်ဖီခိုင်ခိုင်လုံလုံ။ အနည်းငယ်စိုစွတ်သောကုန်းမြေရဲ့တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုဇွန်းဒါအပေါ်သူမ၏ပိုက်ဆံအိတ်, ဖိနပ်, အိတ်များနှင့်ပွတ်သပ်နေတဲ့သိုးမွှေးသို့မဟုတ် flannel အထည်နှင့်လုံ့လရှိသူလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပတ်ရစ်ခံရဖို့ရှိသည်။ အရေပြားသစ်ကိုနဲ့တူ gleams ။
ဂရုတစိုက်အရာအနည်းငယ်အမိုးနီးယားထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်မှရေထဲမှာ tploy အီးကိုလျှော်: သားရေပိုက်ဆံအိတ်အရှင် esch နိုင်ပါတယ်စေချင်တယ်။ ထိုအခါကြက်ဆူပင်နှင့်အတူစိမ်အထည်နှင့်အတူခြောက်သွေ့သုတ်။
သားရေဖိနပ်ပေါ်သို့မှခြောက်သွေ့ပြီးနောက်ရေနံဂျယ်လီနှင့်အတူသူတို့ကိုရှင်းလင်းခိုင်မာစေကြသည်မဟုတ်, နှင့်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် clean နှင့်တစ်ဦးထွန်းလင်းမှပွတ်သပ်ရန်။ Streak (အဖြူအစက်အပြောက်), သငျသညျရှာလကာရည်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဖိနပ်နှင့်အတူမှိုဓာတ်ဆီ၌နှစ်ပြီးသောအဆိုပါ swab ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
သငျသညျသိုလှောင်မှုအတွက်အီးထားရှေ့တော်၌ထိုဖိနပ်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, newsprint သို့ .natolkayte ။ တင်းကျပ်စွာဖိနပ်ထဲသို့ကျပ်, ကအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူ။ ဖိနပ်မီးဖိုသို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့ဓါတ်ရောင်ခြည်အနီးခန်းခြောက်လျှင်အရေပြား, ဆိုးရွားသွား။
ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ရောင်စုံဖိနပ်ကောင်းကောင်း Vaseline နှင့်အတူသန့်ရှင်းနေကြပါတယ်။ သူသည်ထွန်းလင်း pridat ဒါကိုတော့၏အသွင်အပြင်ကာကွယ်ပေးသည်။
သားရေဖိနပ်မှအစဉ်အမြဲကြော့ကြည့်ခဲ့ကြောင့်အရေပြား elasticity ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းသူမ၏အသုံးပြုမှု emulsion မုန့်သည်ဆိတ်သငယ်အဘို့အဂရုစိုက်ရန်အကြံပြုသည်, အစိုဓာတ်ကိုကနေဖိနပ်ကာကွယ်ပေးသည်နှင့်အရှင်ဘဝကeခြေအိတ်ကိုတိုးချဲ့။
သစ်ကိုသားရေလက်အိတ်သေးငယ်လွန်းလျှင်, တကစိုစွတ်သောပဝါ၌သူတို့ကိုခြုံရန်လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးနာရီအကြာတွင်ပေါ်တွင်တင်ရန်နှင့်လက်ပေါ် dosushit ။
သားရေလက်အိတ်, အကျီ, flannel ရှင်းလင်းဖို့အကြံပြုအင်္ကျီပေါ့ပေါ့ရိုက်နှက်ကြက်ဥလူဖြူစိမ်။
Резиновые сапоги и галоши следует мыть мягкой тряпкой под струй воды. Сильно тереть резиновую обувь нельзя, так как от этого она теряет блеск. Время от времени е надо полировать тряпочкой, смоченной глицерином или ဟင်းရွက်ဆီ.
မီးဖွငျ့ခွောကျသှေ့မဟုတ်ရော်ဘာဖိနပ်မ mothballs နှင့်အတူဗီရိုထဲမှာစောင့်ရှောက်: ကနေရာဘာ, coarsens အရောင်နဲ့အက်ကြောင်းရှုံးသည်။
Posted in, ဘဝအဖှဲ့အစညျး
66 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,243 စက္ကန့်ကျော် Generate ။